BitDefender 2009 (Version 12.0) Crack — MYSTERY ZILLION
BitDefender 2009 (Version 12.0) Crack
BitDefender 2009 (V.12) ကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်ပါ။ BitDefender ရဲ့လိုင်စင်ကို ၂၀၄၇ခုနှစ်အထိထားလို့ရပါတယ်။ နောက်တနည်း၊ Trial ပုံစံနဲထားပြီး ရက်၃၀ ကိုဘယ်တော့မှ မရော့အောင်ထားလို့လဲရပါတယ်။ BitDefender သမားများအတွက် အလွန် အသုံး၀င်တဲ့ crack ပါ။
စကား၀ှက်က 123 ပါ
BitDefender Crack v2.0
BitDefender Total Security 2009 32bit Version
BitDefender Total Security 2009 64bit Version
Manual Update Download (Offline Update)
32bit Offline Update
64bit Offline Update
"The update package weekly.exe is released every Friday and includes all the virus definitions and scan engines updates available up to the release date." လို့ပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ စနေနေ့မှ update ဖြစ်ပါလိမ်မယ်:67:
Kaspersky သုံးလို့အဆင်မပြေတဲ့အခါ Bit Defender ပြောင်းသုံးလို့ရတာပေါ့။
Online Update ကောရလား။ Offline ဆိုရင်ကောဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ... သိရင် ပြောကြပါဦး ... :77::):77:
File က Password ကြီးနဲ့ဗျ ...
Password က 123 ပါ။
ကို ရောင်စိန် ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
password ပြောပြပေးတဲ ့ကို Alexander ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ...
Antivirus သုံးဖို ့စိတ်ညစ်နေတဲ ့လူတွေ အတွက် သတင်းကောင်းပဲ ဗျို ့:D
BitDefender က Hack tool ဆိုပြီးဖျက်မှာစိုးလို့ Password ထည့်ထားလိုက်တာဗျ... ဟီး...:D
နောက်ပြီး WinRAR မရှိတဲ့သူလဲအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီး ZIP နဲလုပ်လိုက်မိတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ရေးထားတဲ့ comment ကမပေါ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ Password ကိုတော့ ဖိုင်နာမည်တခုလိုရေးပေးလိုက်တယ်ဗျ။ အဆင်မပြတာကိုခွင့်လွတ်နော်:P
Crack Box ကတော့ online update လုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော် Offline update ကိုထပ်ပြီဖော်ပြထားပါတယ်။ သူတို့စံတော်ချိန်နဲ့သောကြာနေ့တိုင်း update လုပ်တယ်တဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ စနေနေ့လောက်ပေါ့။ File size က 40MB ကျော်တယ်ဗျ တော်တော်ကြာအောင်ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရလိမ့်မယ်:D
Bit Defender က Kaspersky လိုမျိုးပဲ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်။ သူက Registry Key တွေကိုပါ စစ်ပေးတယ်။ Kido @ Conficker Worm ဝင်ဖူးကြလား။ Bit Defender က ကောင်းကောင်းနိုင်ပါတယ်။ Kaspersky က Virus ကိုတော့ တွေ့ပါတယ်။ Skip လုပ်ခိုင်းနေတာ များတယ်။
Bit Defender က စက်ကို အရမ်းလေးစေပါတယ်။ Kaspersky က တော့ မလေးဘူး။ Interface အရတော့ Kasper က ရှင်းတယ်။ BD က ရှှုပ်တယ်။ အခုလို crack ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ Keygen က Invalid Key ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။
မနေ့က အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာလေးပါ... ကယောင်ပေးထားတဲ့ဗားရှင်းနောက်ထွက်တာလေးပါ v3.0 ပါခင်ဗျာ ကျတော့ဘလော့မှာ တင်ထားပါတယ် ကိုယောင်ရဲ့ ကော်ပီရိုက်နဲ့ညိမှာစိုးလို့ ထပ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.....
ကျတော်တို့ တွေလိုင်စင်ဗားရှင်း အန်တီဗိုင်းရပ်တွေ ဝယ်မသုံးနိုင်တဲ့အခါ အန်တီဗိုင်းရပ်တွေရဲ့လိုင်စင် ကိုခရက်လုပ်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကိုလိုက်လံ ရှာဖွေအသုံးပြုကြပါတယ် вЂ¦ အင်တာနက် ပေါ်မှာ cracker တွေဟာသူတို့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ crack တွေ patch တွေနဲ့ keygen တွေကို တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်вЂ¦ အဲ တစ်ချို့တွေက စေတနာနဲ့ crack လုပ်ပေးကြတာရှိ သလို တစ်ချို့ တွေက စေတနာလွန် ကောင်ကောင် လေးတွေထဲ့ပေးတတ်ကြပါတယ် вЂ¦ အဲ့ဒီတော့ အန်တီဗိုင်းရပ် မတင်ခင် ဝင်ပြီးဖြစ်နေ ရောဖြစ်တတ်ပါတယ်вЂ¦ ခုလဲလာပြန်ပါပြီ вЂ¦ ဒီ web site ရဲ့ စစ်တန်းများအရ вЂ¦